Izibane ze-UV ze-Aquarium: Zifuneka nini? | Ngeentlanzi
Kukho izinto ezininzi zokuncedisa i-aquariums, kodwa i Isibane se-UV samanzi yenye yezona ziluncedo kakhulu. Kwaye kunokusinceda ukugcina umgangatho wamanzi ukuze iintlanzi zibe nemeko efanelekileyo ukuze zikhule. Ayisiyisixhobo esisasetyenziswa ngokubanzi, kuba zintsha kakhulu kwintengiso. Abavelisi abaninzi beefilitha ze-aquarium bazidibanise nezihluzi zabo, nangona kungacaci ukuba lolona khetho lulungileyo, kuba iingcali azivumelani nokusetyenziswa kwazo okuqhubekayo okanye iiyure ezimbalwa. Nangona kunjalo, phakathi kweefilitha zamachibi, kunqabile ukufumana icebo lokucoca ngaphandle kwesibane se-UV esakhelweyo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zibane zibalaseleyo ze-UV zamanzi, ukuba zisebenza njani kwaye kufuneka uthathele ingqalelo ntoni.
1 Ezona zibane zibalaseleyo ze-UV ze-aquarium
2 Yintoni isibane se-UV kwi-aquarium
3 Zisebenza njani
4 Zingaphi iiyure zokuba isibane se-UV se-aquarium kufuneka sikhona?
5 Ngaba kunyanzelekile ukuba utshintshe ibhalbhu yesibane se-UV ye-aquarium?
6 Ngaba isibane se-UV sinokusetyenziswa kwi-aquarium etyaliweyo?
7 Ngaba isibane se-UV sinokusetyenziswa kwi-aquarium yolwandle?
8 Kuphi ukuthenga isibane se-UV esinexabiso eliphantsi
Ezona zibane zibalaseleyo ze-UV ze-aquarium
Sera Fil Bioactive lokucoca ulwelo ...
I-LEDGLE 13W Isibane se-UV...
Isibane se-UV se-Fdit ...
ViaGasaFamido Ukukhanya kwe-Aquarium ...
Isibane esicocekileyo se-Aquarium, ...
Yintoni isibane se-UV kwi-aquarium
Izibane ze-UV ze-Aquarium ziluncedo olukhulu ekususeni ulwelwe olunqunyanyisiweyo. Banokuthintela kwaye banyange izifo ezithile eziqhelekileyo zamanzi amatsha netyuwa, anjengeendawo ezimhlophe.
Ngokusisiseko, ukukhanya kwe-UV "kubulala" iintsholongwane ezahlukeneyo, iintsholongwane, okanye iiseli zobulembu. Ingabulala naluphi na uhlobo lweebhaktiriya, nokuba ibacteria yokuthambisa eluncedo kakhulu kwinkqubo yokucoca i-aquarium.
Izibonelelo zokuba nesibane se-UV kwi-aquarium
Ukuba nesibane se-UV se-aquarium kunokuba luncedo. Ezi zezibonelelo ezahlukeneyo ezinazo:
Ngokukhawuleza nangempumelelo kunciphisa iibhaktheriya kunye ne-algae emanzini e-aquarium.
Inokususa ubumanzi emanzini obangelwe yi-algae kunye neebhaktiriya.
Isibonisi sangaphakathi siqinisekisa ukubulala iintsholongwane ngokukuko.
Uya kufumana iziphumo ezigqwesileyo ngokusetyenziswa kwamandla amancinci.
Le yinkqubo ephinda-phindwe kabini kunezixhobo zokuthambisa zemveli.
Ayizukuchaphazela amandla okucoca ulwelo lwe-aquarium.
Ukuba ugcina amancinci, Kuya kunciphisa kakhulu umngcipheko wosulelo.
Kananjalo ayizukulimaza iibhaktheriya ezifanelekileyo kwifilitha.
Ukufakwa kulunge kakhulu kwaye kukho utshintsho oluzenzekelayo xa isibane se-UV-C sithathelwe indawo.
Isibane se-ultraviolet sivelisa imitha ye-ultraviolet okanye imitha ye-UV. Olunye usetyenziso lokukhanya kwe-UV kukucoca inzalo (izibane ze-UV ezisetyenziswa emanzini). Kwimilinganiselo ethile yamaza, iya kutshabalalisa iDNA yeentsholongwane (ezinje ngeebhaktheriya okanye iintsholongwane) ezikhoyo emanzini e-aquarium ngaphandle kokushiya naluphi na uhlobo lwentsalela nokubathintela ekuveliseni kwakhona.
Izibane ze-UV ze-aquariums zihlala zigqunyiwe, ke kuphela ngamanzi aya kuchaphazeleka yimitha yazo. Kubalulekile ukukhumbula ukuba akufuneki sijonge ngqo ekukhanyeni kuba inokusichaphazela.
Zingaphi iiyure zokuba isibane se-UV se-aquarium kufuneka sikhona?
Le yingxoxo-mpikiswano evulekileyo kwaye akukho mgangatho mnye. Iingcali, i-hobbyists, kunye nabavelisi abavumelani malunga nokuba izibane ze-UV ze-aquarium kufuneka zisebenze ixesha elingakanani. Nangona abanye abantu becinga ukuba ukuvumela ukuba kusebenze iiyure ezi-3 ukuya kwezi-4 ngosuku kwanele, abanye bacinga ukuba kufuneka kusebenze yonke imini ngaphandle kwengxaki kwaye ngekhe kuchaphazele ukulingana kwe-aquarium.
Xa sinengxaki ye-algae kwi-aquarium, kuyinto eqhelekileyo ukukhanya kusebenza iiyure ezingama-24 ngosuku njengoko kunokusinceda sisuse ingxaki. Inani leentsuku ekufuneka isebenze ngalo lixhomekeke kwinqanaba lokungena. Kukho abantu abacinga ukuba ayinakushiywa ibaleka iiyure ezingama-24 ngosuku. Baninzi abantu abathandayo abacinga ukuba amaqamza angadalwa kwi-aquarium kwaye nokuba kukho usulelo oluncinci kunokubangela ukuwa kwetanki yeentlanzi.
Ngaba kunyanzelekile ukuba utshintshe ibhalbhu yesibane se-UV ye-aquarium?
Ibhalbhu nganye inobomi obuthile obuchanekileyo, obuchazwe kwiiyure zokusetyenziswa. Abavelisi bahlala bebonisa ubomi bebhalbhu ukuze siqonde ubomi bayo. Ukuba ubomi besiqingatha sebhalbhu yokukhanyisa Ziiyure ezili-1.000 3, ukuba siyayidibanisa iiyure ezi-333 ngosuku, inokuhlala malunga neentsuku ezingama-XNUMX.
Kwimeko yeebhalbhu ze-UV, ziyaphulukana nokusebenza njengoko zisetyenzisiwe, ke kuyacetyiswa ukuzitshintsha ngaphambi kokuphela kobomi bazo obuluncedo, nokuba azitshiswanga.
Ngaba isibane se-UV sinokusetyenziswa kwi-aquarium etyaliweyo?
Abakavumelani kwesi sivumelwano. Kukho abantu abathandayo abathi isibane sinokucoca umgquba esetyenziselwa izityalo. Izichumisi ezininzi zenziwe I-chelates kunye nentsimbi kwaye inokucocwa ngemitha ye-UV. Kwelinye icala, kukho abo bacinga ukuba ukuthintela ukwanda kwe-algae kungcono ukuba nesibane.
Ngaba isibane se-UV sinokusetyenziswa kwi-aquarium yolwandle?
Ukuma kwayo kuxhomekeke kuhlobo lwamanzi akwi-aquarium. Ingasetyenziselwa kwiindawo ezinamanzi anetyuwa kunye neendawo ezinamanzi amatsha. Ukusebenza kwayo kuyafana. Abanye bacinga ukuba sisixhobo esingafunekiyo kuba iiprotokholi ezibekelwe bucala zokuzisa iintlanzi kwi-aquarium ingaphezulu. Nangona kunjalo, isibane se-UV sinokuqinisekisa ukutshatyalaliswa kweebhaktheriya ezinokuthi zihlasele iintlanzi zakho.
Kuphi ukuthenga isibane se-UV esinexabiso eliphantsi
Amazon: Njengoko sisazi, iAmazon inenye yezona zinto zilungileyo zokuthenga izixhobo ze-aquarium ngexabiso elikhulu. Banobulunga obuphezulu kunye nethuba lokwazi uluvo lwabanye abasebenzisi abathe bathenga ngaphambili imveliso efanayo.
Kiwooko: Le yeyona venkile ilulutho. Ayisiyiyo kuphela ivenkile ebonakalayo, kodwa unokuba nevenkile ebonakalayo. Nangona amaxabiso asezitolo anokuphakama, unokufumana uluvo lweengcali ezisebenza ubuso ngobuso.
Zooplus: I-Zooplus ayinazintlobo zininzi zezinto zokuncedisa kwi-aquariums, ngenxa yoko zisenokungabi zezona ndawo zifanelekileyo zokujonga isibane se-UV samanzi.
Njengoko ubona, le yinto yokunceda eluncedo kodwa ivelisa impikiswano phakathi kweengcali kunye nabathandi be-aquarium. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezibane ze-UV zamanzi kunye neempawu zawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Izibane ze-UV zamanzi